← Mr.Bill Gate ထံသို့ အိတ်ဖွင့်စာ
Ka Nu’ Inn Nuam →
မဲပေးမှုအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်မှုတွေက ယျေဘူယျအားဖြင့် ချောချောမောမော ရှိပြီး စည်းမျဉ်း အများစုကိုလည်း လိုက်နာ ကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၇၁ % က မဲပေးမှုရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တွေကို ချောချောမွေ့မွေ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်သွားကြတယ်။
အဲဒီနေ့ မဲရုံပိတ်တဲ့ ညနေ လေးနာရီ မှာတော့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ စိတ်ဓာတ်တွေ တက်ကြွ နေကြပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလမှာ ကန့်သတ်မှုတွေ အတော် များတဲ့အတွက် သူတို့ ပါတီတွေဟာ အများစု နေရာ အနိုင်မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ အစထဲက မျှော်လင့် ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြည်ပက အတိုက်အခံ တွေက သပိတ်မှောက်ဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ ကြားက မဲလာပေးသူတွေ များခဲ့တဲ့ အတွက်၊ လူတွေဟာ သူတို့ နှစ်သက်တဲ့ ပါတီကို မဲပေးဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြတဲ့အတွက် သူတို့ စိတ်အား တက်ကြွ နေကြတာပါ။ မဲရုံ ပိတ်ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ မဲရုံစောင့်တွေနဲ့ အများပြည်သူတွေ ရှေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံအလိုက် မဲတွေ ရေတွက် ကြပါတယ်။ ကနဦးပိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီပါတီ များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့ကို ထောက်ခံသူ အတော် များတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ မဲပေးမှုကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကတော့ ညသန်းခေါင် အချိန် ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ရာမှာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတွေ အနေနဲ့ ၀င်ပြိုင်တဲ့နေရာများရဲ့ ၄၀%မှာ နိုင်နိုင်တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကလည်း ၀င်ပြိုင်တဲ့နေရာ ၄၀% မှာ နိုင်နိုင်တယ်။ တစညကတော့ ၁၄% လောက်ပဲ နိုင်မယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတွေ အနေနဲ့ မဲရုံတိုင်းမှာ ကိုယ်စားလှယ် မထားနိုင်တဲ့ အတွက် မဲရုံအားလုံးရဲ့ ရေတွက်မှုကို မသိနိုင် ပေမယ့် အဲဒီညမှာတော့ ကိုယ်စားလှယ် အတော်များများက သူတို့အနေနဲ့ မဲအသာရ နေတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ။
ပါတီများ % တစ်သီးပုဂ္ဂလ
အမျိုးသားလွှတ်တော် ၅၇ ၂၅ ၃ ၂ ၁၂ < ၁
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၅၉ ၂၅ ၃ ၂ ၁၀ <၁
(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်) ၅၈ ၂၅ ၃ ၂ ၁၁ <၁
ဧရာဝတီ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၇%၊ တပ်မတော် ၂၅% ၊ တစည ၈%
ပဲခူး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၈% ၊ တပ်မတော် ၂၅% ၊ တစည ၅%၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ၂%
မကွေး ပြည်ခိုင်ဖြိုး၇၁%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၄%
မန္တလေး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၃%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ အခြား၂%
စစ်ကိုင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၃%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ အခြား ၈%၊ ( အဖြေမရသေး ၂ နေရာ)
တနင်္သာရီ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၁%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၄%
ရန်ကုန် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၁%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၆%၊ NDF ၄%၊ အခြား ၅%
ချင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၉%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ CPP ၂၁%၊ CNP ၂၁%၊ ENDP ၄%
ကချင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး၃၉%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ တစည ၂၂ %၊ SNDP ၈%၊ အခြား၆%
ကယား ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၅%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊
ကရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၀%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ PSDP ၁၈%၊ KPP ၉%၊ AMRDP ၉%၊ အခြား ၉%
မွန် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၆%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ AMRDP ၂၃%၊ တစည ၆%
ရခိုင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၀%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ RNDP ၃၈% ၊ အခြား ၇%
ရှမ်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး၃၅%၊ တပ်မတော် ၂၅%၊ SNDP ၂၁ %၊ အခြား ၁၄% ( ၈ နေရာ ကျန်)
Posted on December 5, 2010, in Uncategorized and tagged ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် သှံးသပ်ချပ်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.